Isixhobo sokuLungisa iLizwi. Isoftware yokuBuyisa iLizwi. Buyisa iifayile ze-DOC kunye ne-DOCX.
DataNumen Word Repair Ingaba i eyona Ukulungiswa kwamagama kunye nesixhobo sokubuyisela emhlabeni. Inokulungisa i-Word doc kunye ne-docx eyonakeleyo amaxwebhu kunye nokufumana kwakhona idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswe ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,631)
Ngoba DataNumen Word Repair?
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Inqobo ebalulekileyo yemveliso yokubuyisa iLizwi. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen Word Repair unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ibhetele kakhulu kunayo nayiphi na enye into okhuphisana nayo kwintengiso!
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen Word Repair utshaya ukhuphiswano
Ndiyabulela kakhulu. Ewe, isisombululo sakho sokubuyisa umxholo weOfisi yeMS Office sesona silungileyo sivavanywe ukuza kuthi ga ngoku.
I-Landis + iGyr ePoland Sp. z oo
Ndinefayile yegama lefayile eneziphoso zokuyilungisa, iwebhusayithi yakho ilungisa ifayile yegama kwimizuzu emi-6.
Oku kwahlukile kwaye kulungile kakhulu.
Injineli yeFiziksi https://helpwithphysics.com
Owu ukulunga kwam, ENKOSI! Andikholelwa ukuba ukwazile ukuyilungisa! Ndizamile ngokoqobo yonke enye into- le iyamangalisa, kwaye ndinjalo
Owu ukulunga kwam, ENKOSI! Andikholelwa ukuba ukwazile ukuyilungisa! Ndizamile ngokoqobo yonke enye into- le iyamangalisa, kwaye ndinombulelo kakhulu.
Enkosi kwakhona ngoncedo lwakho! Ndonwabile ukubhala ubungqina ukuba ufuna enye- akekho omnye umntu okwazileyo ukuyilungisa le nto !!
Nge-16 kaSeptemba 2015
Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho kunye nomdla awuzange ube nobunzima nangayiphi na indlela.
Ndiyaneliseka kakhulu. Ndikucebisa kuwo wonke umntu. Ndiyanqwena
Ndiyaneliseka kakhulu. Ndikucebisa kuwo wonke umntu. Ndiyathanda ukuba uqhubeke nempumelelo.
NgoJan 29, 2019
Isisombululo sokulandela iimpazamo eziqhelekileyo ngenxa yeLizwi loRhwaphilizo kuXwebhu
Ifayile ye-xxxx.docx ayinakuvulwa kuba kukho iingxaki ngeziqulatho
ILizwi linamava ngempazamo xa uzama ukuvula ifayile
Incoko yababini yokuGuqulwa kweFayile pop xa uvula uxwebhu lweLizwi elonakeleyo
Imifanekiso ayinakubonisa kumaXwebhu eLizwi angamaNgcoliso
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Word Repair v4.2
Inkxaso yokulungisa iMicrosoft Word 6.0, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 kunye neLizwi leOfisi yamaxwebhu angama-365.
Amaxwebhu enkxaso aveliswe lilizwi kwiWindows nakwiMac.
Inkxaso yokufumana kwakhona umbhalo, imifanekiso kunye nokufomatha kumaxwebhu eLizwi.
Inkxaso yokufumana kwakhona iitafile.
Inkxaso yokufumana kwakhona uluhlu olunamachaphaza okanye iinombolo.
Inkxaso yokufumana kwakhona ukufomatha kunye nezixhumanisi.
Inkxaso yokufumana kwakhona iibhukumaka.
Inkxaso yokufumana kwakhona uxwebhu lweLizwi kwitemporary iifayile xa kwenzeka intlekele yedatha.
Inkxaso yokulungisa i-Word doc kunye neefayile ze-docx kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, ezinjengeediski zefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibhetshi yeefayile zeLizwi kunye nefayile ye-docx.
Inkxaso yokufumana nokukhetha amaxwebhu eLizwi aza kulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayile ye-doc kunye ne-docx kunye nomxholo (cofa ekunene) kwimenyu yeWindows Explorer ngokulula.
Umgca wokuxhasa inkxaso (i-DOS prompt) iiparameter zokulungisa iifayile zeLizwi.
usebenzisa DataNumen Word Repair Ukufumana kwakhona amaXwebhu eLizwi eLonakalisiweyo
Xa amaxwebhu akho eLizwi (* .DOC kunye * .DOCX iifayile) onakele okanye onakele kwaye awukwazi ukuwavula ngokwesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen Word Repair ukuskena iifayile zeLizwi kunye nokufumana kwakhona idatha kangangoko.
Qaphela: Ngaphambi kokufumana kwakhona nayiphi na ifayile yeLizwi eyonakeleyo okanye eyonakeleyo nge DataNumen Word Repair, nceda uvale iMicrosoft Word kunye nezinye iinkqubo ezinokufikelela kwifayile yeLizwi.
Khetha igama elonakeleyo okanye elonakeleyo leLizwi .doc / .docx ifayile eza kulungiswa:
Ungafaka iLizwi .doc / .docx igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana ifayile ukuba ilungiswe kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen Word Repair iya kugcina ifayile yeLizwi emiselweyo njenge-xxxx_fixed.doc, apho i-xxxx ligama lomthombo weLizwi .doc / .docx ifayile. Umzekelo, kwifayile yeLizwi yomthombo eyonakalisiweyo.docx, igama elingagqibekanga lefayile emiselweyo iya kuba yiDamaged_fixed.doc. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lefayile esisigxina ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile esisigxina.
nqakraza i iqhosha. DataNumen Word Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa ifayile yeLizwi eyintsusa.
Inkqubela phambili yebha
iya kubonisa inkqubela phambili yokulungisa.
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ifayile yeLizwi yomthombo inokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku unokuvula ifayile yeLizwi emiselweyo ngeMicrosoft Word okanye ezinye iinkqubo ezifanelekileyo.
DataNumen Word Repair 4.2 ikhutshwa ngoMatshi 10, 2021
Inkxaso yolwimi oluninzi kwi-GUI.
Inkxaso yeSpanish, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, isiPhuthukezi, isiRashiya, isiJapan, isiKorea kunye nesiTshayina esenziwe lula.
DataNumen Word Repair 3.7 ikhutshwa nge-12 kaDisemba, 2020
DataNumen Word Repair 3.5 ikhutshwa nge-2 kaNovemba, 2020
DataNumen Word Repair 3.4 ikhutshwa nge-4 kaNovemba ngo-2019
DataNumen Word Repair 3.3 ikhutshwa nge-23 kaMeyi ka-2019
Sebenzisa itekhnoloji ye-AI ukuhlalutya ifayile.
DataNumen Word Repair 3.2 ikhutshwa ngoMatshi 14, 2019
Uyile kwakhona injini yokulungisa ibhetshi.
Inkxaso yokugcina ilog yokulungisa ibhetshi.
DataNumen Word Repair 3.1 ikhutshwa nge-21 kaJanuwari, 2019
Inkxaso yeLizwi 2019.
Ukuphucula injini yokuhluza.
DataNumen Word Repair 3.0 ikhutshwa nge-25 ka-Okthobha ka-2018
Ukuphucula ukubuyiswa kweziqendu zomhlathi.
DataNumen Word Repair 2.9 ikhutshwa nge-25 ka-Agasti ka-2018
Ukuphucula ukubuyiswa kweetekisi.
DataNumen Word Repair 2.8 ikhutshwa nge-16 kaJulayi, 2018
Inkxaso yeLizwi kwiOfisi yamaxwebhu angama-365.
DataNumen Word Repair 2.7 ikhutshwa nge-18 kaJanuwari, 2018
Inkxaso yokufumana kwakhona idatha.
DataNumen Word Repair 2.6 ikhutshwa nge-9 kaNovemba ngo-2017
Inkxaso Windows 10.
I-Ofisi yeNkxaso ka-2016.
DataNumen Word Repair 2.5 ikhutshwa nge-3 kaJulayi, 2015
DataNumen Word Repair 2.1 ikhutshwa ngoJulayi 20, 2013
Inkxaso yokufaka umfanekiso kuxwebhu olufunyenweyo.
Inkxaso yabalinganiswa baseAsia.
DataNumen Word Repair 2.0 ikhutshwa ngoJuni 8, 2013
Iifomathi zeNkxaso yeLizwi 2007, 2010 kunye no-2013.
Guqula ujongano lomsebenzisi lwesicelo.
DataNumen Word Repair 1.1 ikhutshwa ngoJuni 4, 2005
Inkxaso yokulungisa amaxwebhu eMicrosoft Word 2003.
Ukuphucula injini yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ukulungisa kunye nokufumana kwakhona iAcrobat eyonakeleyo PDF iifayile.
Ukulungisa kunye nokufumana kwakhona iMicrosoft Excel xls, xlw kunye neefayile ze-xlsx ezonakeleyo okanye ezonakeleyo.
Ukulungisa kunye nokufumana kwakhona indawo yolwazi yokufikelela kwiMicrosoft (.mdb kunye .accdb).